koorsooyinka Engineering ee Ukraine - Xarunta Admission Yukreeniyaan
Civil, Dhismaha ama Architecture Engineering
Degree Masters Duration: 2 sano(lacagta waxbarashada 3500USD / sanadkii, iyo kharashyada kala duduwan for sanno 1aad oo keliya hoyga: 2150USD)
(elektaroonig ah u soo diray inuu Ukraine Safaaradaha ee ardayda’ goobta iyada oo Wasaaradda Arrimaha Dibadda. Waxaan ku siin nuqul ka mid ah in Visa Support / Xaqiijinta ardayda iyo sidoo.) 100$US
lacag hostel (qolalka dhowaan la dayac tiray iyo sidoo goglan, laba qof oo ka mid ah qolka) 300$US halkii sannad dugsiyeedka
lacagta waxbarashada ka bilaabo sannadda 2aad sannad final 2600$US sanadkiiba ay ka mid yihiin hoy.
Immigration Caymiska: 100$US
lacag hostel (qolalka dhowaan la dayac tiray iyo sidoo goglan, laba qof oo ka mid ah qolka) 600$US halkii sannad dugsiyeedka
Charges Consultancy of our adag 900$US
lacagta waxbarashada ka bilaabo sannadda 2aad sannad final 3000$US sanadkiiba ay ka mid yihiin hoy.
Engineering korontada & Electronics
* kharashka martiqaad 250$US
* eedeeyay Service Courier 50$US
Immigration Caymiska 50$US
lacag hostel (Waxaa laga yaabaa kala duwan yihiin qaar ka mid ah Jaamacadaha) 600$Maraykanka muddo hal sano ah
lacagta waxbarashada ka bilaabo sannadda 2aad sannad final 3000$Maraykanka sanad kasta oo ay ku jiraan hoy
lacag hostel (waa kala duwanaan karaan jaamacadaha kala duwan, waa reconfirm) 500$US halkii sannad dugsiyeedka
lacagta waxbarashada ka 2aad sannad final hoy 3000$Maraykanka sanad kasta
Technology Information (BSc. & MSc.)
Science Systems Computer / Computer Engineering / Computer iyo Networks / Technology Information / Software Engineering / Isgaarsiinta / Mass Communication, Engineering farsamo, Korontada / Electronics Engineering, Civil / Engineering Architecture, Automobile Engineering, Oil and Gas / Petroleum Engineering
Degree Masters Duration: 2 sano(lacagta waxbarashada 2600EUR / sanadkii, iyo kharashyada kala duduwan for sanno 1aad oo keliya hoyga: 2150USD)
(diray in Ukraine Safaaradaha goobta ardayga iyada oo Wasaaradda Arrimaha Dibadda. Waxaan sidoo kale ku siin doonaa koobi waxaa ka mid ah in arday) 50$US
Engineering farsamo (BSc. & MSc.)
Degree Masters Duration: 2 sano (lacagta waxbarashada 2600EUR / sanadkii, iyo kharashyada kala duduwan ee sanadka 1aad oo keliya hoyga: 2150USD)
* kharashka martiqaad 300$US
* eedeeyay Service Courier 100$US
Immigration Caymiska 100$US
lacag hostel (Waxaa laga yaabaa kala duwan yihiin qaar ka mid ah Jaamacadaha) 500$Maraykanka muddo hal sano ah
lacagta waxbarashada ka bilaabo sannadda 2aad sannad final 3200$Maraykanka sanad kasta oo ay ku jiraan hoy
Systems Computer iyo Networks (BSc & MSc.)
Degree Masters Duration: 2 sano (lacagta waxbarashada 2600EUR / sanadkii, iyo kharashyada kala duduwan for sanno 1aad oo keliya hoyga: 2150USD)
lacag hostel (waa kala duwanaan karaan jaamacadaha kala duwan, waa reconfirm) 600$Maraykanka sannadkii a6ademic
lacagta waxbarashada ka bilaabo sannadda 2aad sannad final 2800$US sanadkiiba ay ka mid yihiin hoy
lacag hostel (qolalka dhowaan la dayac tiray iyo sidoo goglan, laba qof oo ka mid ah qolka) 500$US halkii sannad dugsiyeedka
Sayniska Kombiyuutarka / Systems / Computer Engineering Computer iyo Networks / Technology Information / Engineering Software
Degree Masters Duration: 2 sano(lacagta waxbarashada 2600USD / sanadkii, iyo kharashyada kala duduwan for sanno 1aad oo keliya hoyga: 700USD)
Sayniska Kombiyuutarka (BSc. & MSc.)
lacagta waxbarashada ka bilaabo sannadda 2aad sannad final 3000$US sanadkiiba oo ay ku jiraan hoy.
tababarka Cisco (barnaamijka shahaadada)
tababarka Cisco siiyo in Ukraine waa mid caalami ah loo aqoonsaday iyo ardayga waxaa la siiyaa “Certificates Caalami ansax” on dhamaystirka mid ama dhammaan barnaamijyada.
Language of edbinta: tababarka Cisco waxaa laga heli karaa luqad kasta
taariikhda Course bilowga: mar kasta oo ku wareegsan sanadkii la soo
looga baahan yahay ugu yar: shahaadada computer kasta, ama bachelor ama shahaadada Master-ka mid waaweyn.
Duration si ay u dhamaystiraan Cisco: 2 sano. Laakiin haddii ardayga uu sameeyay tababar Cisco hore, isagu / iyadu bilaabi kartaa wareega xiga ee tababarka. duration ugu yar inay ka qayb galaan jaamacadda tababarka Cisco: 6 bilood
xirmo tababar Hal sano: 3500USD waxaa ka mid ah waraaq Martiqaad + Charges Courier + eedeeyay Bank Trasaction (425SD), Taageerada Visa, lacagta waxbarashada, Hoyga at hostel jaamacad, Caymiska Caafimaadka, Immigration Caymiska, Diiwaangelinta ee Waaxda Socdaalka, Warqadaha loo baahan yahay in ay nadiifiso Airport Immigration, Air qaadayo dekedda, Gaadiidka in jaamacadda, Our latalin iyo adeegga eedeeyay.
6 xirmo tababar bilood: 3000USD waxaa ka mid ah waraaq Martiqaad + Charges Courier + eedeeyay Bank Trasaction (425SD), Taageerada Visa, lacagta waxbarashada, Hoyga at hostel jaamacad, Caymiska Caafimaadka, Immigration Caymiska, Diiwaangelinta ee Waaxda Socdaalka, Warqadaha loo baahan yahay in ay nadiifiso Airport Immigration, Air qaadayo dekedda, Gaadiidka in jaamacadda, Our latalin iyo adeegga eedeeyay.
warqad martiqaad + Charges Courier + eedeeyay Bank Trasaction (425SD) waxaa lacagta kaliya in la sameeyo ka dalka ardayga, inta kale ee lacag bixinta waa la bixin ku yimid.
Ardayda waa kor ku 25years jir, Warqad Martiqaad ka + Charges Courier + eedeeyay Bank Trasaction (525SD)
Wargelin Muhim ah: Namibia, Zambia, Zimbabwean, Botswana, Swaziland, Lesotho, Mozambique iyo Malawi ardayda Qaranka, muwaadiniinta kale ee joogo wadamada ku xusan oo ku dhameysatay kaalinta ay dugsiga.
codsadayaasha Indian heli free of warqad martiqaad kharashka sidoo inaad wax ka barato Ukraine jaamacad kasta.
Ardaydu waxay bixisaa qarashka kaliya warqaadayaal lacag u soo dirto warqad martiqaad ay la oogeen waayo i.e gaarsiinta ah. 100USD
* Warqad Martiqaad iyo warqaadayaal eedeeyay waa la bixin dhex Transfer Bank. eedeeyay Bank / Guddiga si ay u gudbiyaan lacagta la codsaday yihiin in la siiyo by ardayga.
Barnaamijyada shahaado Available,
IT Essentials: Hardware PC iyo Software:
IT Essentials The: Hardware PC iyo manhajka Software waxay bixisaa horudhac ah si ay xirfado hardware computer iyo software loo baahan yahay si ay uga caawiyaan la kulmaan baahida sii kordhaysa ee wixii macluumaad ah ee heer-galo iyo technology isgaadhsiinta (ICT) xirfadlayaasha. Manhajka daboolayaa asaaska technology PC, xirka, iyo ammaanka, iyo sidoo kale waxay bixisaa horudhac ah in fikradaha sare.
Ardayda dhamaysta koorsadan awoodaan si ay u sharxaan qaybaha gudaha ee computer ah u noqon doonaa, shirin nidaam computer ah, rakibi nidaamka qalliinka ah, iyo dhibta la isticmaalayo qalab nidaamka iyo software lagu ogaanayo. Gacan-ku-shaybaarada iyo Laptop Virtual iyo qalab waxbarasho Desktop Virtual caawiyo ardayda horumarinta fekerka muhiimka iyo xirfadaha xalinta dhibaatooyinka adag. hawlaha waxbarashada istuuray ku salaysan Cisco Packet lagula soconayo kor sahaminta ee network iyo ammaanka xirka fikradaha iyo ogolaanaysa ardaydeena in ay tijaabiyaan la dhaqanka network.
IT Essentials: Hardware PC iyo Software waa gacan-ku-a, xal e-waxbarashada mustaqbalkiisa-oriented iyadoo culayskana la saarayo waayo-aragnimo wax ku ool ah si ay u caawiyaan ardayda horumarinta xirfadaha aasaasiga ah computer, ay weheliyaan xirfadaha lagama maarmaanka ah mustaqbalkiisa. manhajka wuxuu ka caawiyaa ardayda loogu diyaariyo fursado mustaqbalkiisa heer-galo ICT iyo CompTIA A + shahaado, kaas oo ardayda ka caawisaa inay isu kala suuqa si loo horumariyo mustaqbalkooda. Intaa waxaa dheer, Dabcan waxay siisaa dariiqa waxbarasho si Discovery CCNA iyo manhajka Exploration CCNA a.
Manhajka Cisco CCNA Exploration bixisaa caymiska isku dhafan oo dhamaystiran mowduucyo xirka, ka asaaska codsiyada iyo adeegyada horumarsan, halka siinaya fursado gacan-ku-ool ah waayo-aragnimo iyo jilicsan-xirfadaha horumarka. Manhajka macalimiinta dugsiyada Networking ku salaysan technology, daboolaya fikradaha kasbashada isticmaalaya a-hoos top, teori, iyo hab isku dhafan - ka codsiyada network qodobada network iyo adeegyada la siiyo codsiyada kuwa by lakabyada hoose ee shabakadda.
CCNA Exploration waxaa loogu talagalay ardayda leh xalinta dhibaatada sare iyo xirfadaha gorfaynta. manhajka waxay bixisaa waayo-aragnimo waxbarasho oo dhamaystiran iyo akhriska ee ardayda gorfaynta, adeegsanaya Ingirisiida in si fiican maadooyinka la fikradaha injineernimada. hawlaha Interactive waxaa gundhig manhajka, oo ay la socdaan faahfaahsan, content teori. shaybaaro Advanced dhiso fekerka muhiimka iyo xirfadihii mushkilad xalinta iyo dhiiri sahaminta iyo cilmi.
CCNA Exploration waa la samatabbixin karaa sida manhajka madax banaan ama lagu daray koorso ballaaran oo waxbarasho, sida barnaamijyada degree IT ee, injineernimada, xisaabta, ama sayniska. Iyada oo ugu horayn loogu talagalay hay'adaha sare, CCNA Exploration waa ku haboon ee ardayda heerar badan oo waxbarasho, haddii ay leeyihiin xirfadaha loo baahan yahay, oo hadday u dhowaato waxbarashada dhameystirta style waxbarashada iyo gool waxbarasho.
CCNA Exploration caawiyaa ardayda fursado mustaqbalkiisa heer-galo diyaariyo, waxbarashada sii wadaan, iyo caalamka-aqoonsan shahaado Cisco CCNA.
Cisco Certified Professional Network (CCNP) xaqeedii awood u leh inay qorsheeyaan, fuliyo, xaqiijiyo iyo dhibta shabakadaha ganacsi-degaanka ballaaran hoose iyo iyo si iskaashi leh oo ku saabsan ammaanka sare u shaqeeyaan, codka, wireless iyo video xal. shahaado CCNP waa ku haboon kuwa leh ugu yaraan hal sano oo waayo-aragnimo kasbashada dadka oo diyaar u ah si loo horumariyo xirfadaha iyo madax banana uga shaqeeyaan xal network adag. Kuwa gaaro CCNP waxay ka muujiyeen xirfadaha loo baahan yahay in doorka ganacsi sida farsamo network, taageero injineer, nidaamyada injineer ama injineer network.
Manhajka Cisco CNA Security siisaa tallaabo soo socda oo loogu talagalay dadka doonaya in ay xoojisaa set xirfad heer-CCNA iyo caawin kulmo baahida sii kordhaysa ee xirfadlayaasha ammaanka network. Manhajka bixisaa horudhac ah in fikradaha ammaanka asaasiga ah iyo xirfadaha looga baahan yahay rakibo, dhib, iyo la socodka qalabka network si ay u ilaaliyaan daacadnimada, sir, iyo helitaanka macluumaadka iyo qalabka. CCNA Security caawiyaa ardayda fursado mustaqbalkiisa ammaanka heer-galo oo shahaado Cisco CCNA Ammaanka ee adduunka aqoonsan yahay diyaariyo.
Dabcan waa gacan-ku-, xal e-waxbarashada mustaqbalkiisa-oriented iyadoo culayskana la saarayo waayo-aragnimo wax ku ool ah si ay u caawiyaan ardayda horumarinta xirfadaha ammaanka khaaska ah, oo ay la socdaan fekerka muhiimka iyo xirfadihii mushkilad xalinta adag. CCNA Security waa manhaj milmay labada waxbarashada online iyo fasalka. Ardayda qoraan CCNA Security la filayaa in ay leeyihiin heer-CCNA fikradaha kasbashada aqoonta iyo xirfadaha, oo ay la socdaan PC iyo Internet xirfadaha aasaasiga ah navigation.
Inkasta oo aanay jirin shuruudaha looga baahan yahay koorsada, ardayda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay buuxiyaan Discovery CCNA ama Exploration CCNA manhajka si ay u bartaan isdaba aasaasiga ah heer-CCNA iyo xirfadaha loo baahan yahay bedesheen guusha ee koorsadan. CCNA Security siisaa tallaabo soo socda ee ardayda CCNA Discovery ama CCNA Exploration oo doonaya in ay ballaariyaan xirfad heer-CCNA qarka u saaran inuu diyaariyo xirfado in ammaanka network.
Manhajka Cisco CCNA Discovery bixisaa aragti xirka guud, waayo-aragnimo wax ku ool ah, iyo fursado sahminta iyo jilicsan-xirfadaha horumarka. Manhajka macalimiinta dugsiyada Networking ku salaysan codsiga, daboolaya fikradaha kasbashada gudahood macnaha guud ee deegaan network ardayda la kulmi karaan in nolol maalmeedkooda - xafiiska yar iyo xafiiska guriga (SOHO) xiriirinta in lagu daydo ganacsi iyo isku xirka teori dheeraad ah oo adag ka dib manhajka.
CCNA Discovery waxaa loogu talagalay ardayda xirfadaha aasaasiga ah PC iyo xisaabta aasaas iyo xirfadihii mushkilad xalinta. manhajka waxay bixisaa waayo-aragnimo barasho oo mashquuliya barteyaalka muuqaalka iyo ogeed more. Hawlo badan interactive waxaa gundhig in dhammaan koorsooyinka inay burburto qoraalka iyo caawin xoojiyo fahamka ardayga. Intaa waxaa dheer, tiro badan oo ah shaybaarada dhiiri gacan-ku-dhaqanka dheeraad ah.
CCNA Discovery waa la samatabbixin karaa sida manhajka madax banaan ama lagu daray koorso ballaaran oo waxbarasho, sida technology ama sii barnaamijyada waxbarashada. Manhajka waa ku haboon ee ardayda heerar kala duwan oo waxbarasho iyo noocyada kala duwan ee hay'adaha, oo ay ku jiraan dugsiyada sare, dugsiyada sare, jaamacadaha, kulliyadaha, xirfadiisa iyo farsamo dugsiyada, ururada bulshada, iyo deegaanno kale oo waxbarasho non-dhaqameedyada.
CCNA Discovery caawiyaa ardayda fursado mustaqbalkiisa heer-galo diyaariyo, waxbarashada sii wadaan, iyo caalamka-aqoonsan CCENT iyo CCNA caddeyn Cisco.